Minia Mijery Izay Ao Amin’ny Tambajotrantsika. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Marsa 2016 6:14 GMT
SARY: 3D Tambajotra Sosialy avy amin'ny Stockmonkeys.com (CC BY 2.0)
Ny fahaizana mandaha-teny nataon'ny olona manana fomba fijery hafa tanteraka amin'ny fijeriko manokana no ilaiko indrindra ahafahako manatsara ny fomba fisainako manokana, ary raha ilaina, mandinika indray ny fihevitro manokana.
Tamin'ny herinandro lasa teo, nanoratra ny finiavany mijery izay ao amin'ny tambajotrany ny namako Tin. Nahatonga ahy hieritreritra ny hoe iza no ao amin'ny tambajotrako izany, sy ny inona, ary ahoana no fomba hanitarana ireo roa ireo.
Amin'ny lafiny maro anefa dia mifanohitra tanteraka amin'izay ezahan'ny tambajotra sosialy sy ny sehatra maro atao izany, ka mampanahy ahy indrindra. Misongadina avy any ny “Mety ho ankasitrahanao koa ity …”, na “Natao ho anao” manondro ireo zavatra tiantsika satria mitovy amintsika izy ireo, fa tsy zavatra hahatonga antsika hieritreritra.
Saingy izao no izy: tsy mampaninona ahy ny tsy miombon-kevitra amin'ny zavatra hitako antserasera. Mihoatra noho izany aza; te-hahita zavatra tsy itovizako hevitra aho amin'ny aterineto. Ny fahaizana mandaha-teny avy amin'ny olona manana fomba fijery hafa tanteraka amin'ny fijeriko manokana no tena ilaiko mba ahafahako mihantsy ny fomba fisainako manokana, ary raha ilaina, mijery indray ny fihevitro manokana.
Fitsinjarana Nomerika Tsy ara-drariny
Mifanohitra amin'izany anefa, raha miha-marobe kokoa ny olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao no miditra aterineto, dia tsapa fa toa mihasarotra dia sarotra ny mahazo ireo fomba fijery sy feo samihafa ireo ao amin'ny efijeriko. Mandalina izany trangan-javatra izany ny bokyThe People's Platform [na Ny seha-bahoaka] nosoratan'i Astra Taylor:
Raha ahazoan'ireo vondrona atao an-jorom-bàla tanjaka sy fanararaotana hanova izao tontolo hihaonana sy hiarahana manao zavatra ny aterineto – dia mampamirapiratra ny hantsan'ny tsy fitoviana, manamafy ny ambaratongan-drafitra efa nisy teo aloha ny teknolojia vaovao. Tsy manafoana ny fahefana ny tambajotra: mizara azy amin'ny fomba hafa [ny tambajotra], mandrava ambaratongam-pahefana ka mamokatra rafitra fanilikilihana vaovao.
Mamaritra ny fironana amin'ny “fitiavana ny mitovy (homophilie)” i Taylor – ny fironantsika hiaraka sy hifamatotra amin'ny hafa mitovy amin'ny tenantsika – sy ny fiantraikan'izany amin'ny fitondrantenantsika ara-nomerika, ary ny bokiny (izay andrisihako anao ny hamakiana azy) dia mandalina ny lohahevitry ny fahasamihafana sy ny fahefana amin'ny sehatra ara-tsosialy amin'ny antsipirihany kokoa.
“Fahaizana mandaha-teny avy amin'ny olona manana fomba fijery hafa tanteraka amin'ny fomba fijeriko manokana no ilaiko indrindra ahafahako manatsara ny fomba fisainako manokana, ary raha ilaina, mandinika indray ny fomba fihevitro manokana..”
Tsy sarotra ny mieritreritra ohatra maro, na ao amin'ny aterineto izany na ivelan'ny aterineto. Ny iray izay noeritreretiko indrindra na dia efa tsy eo intsony aza ny ampahany betsaka hatramin'ny nivoahan'ny bokin'i Taylor tamin'ny 2014, dia ny Medium. Tamin'ny lahatsoratra vao haingana tamin'ny BBC mikasika ny tranonkala, “Nanjary sehatra ho an'ny olona izay efa manana mpihaino betsaka indrindra eo amin'izao tontolo izao ny Medium”. Tsy miombon-kevitra feno amin'izany lahatsoratra izany aho, saingy ny tapany farany amin'io no mizotra mankany amin'ny lohahevitra iombonako hevitra aminy : “Indraindray ny Medium no heverina ho toerana kely indrindra ifanatrehana amin'ny fijery hafa noho ny anao manokana.”
Somary mahatsikaiky fa taorian'ny 6 taona nigadrana an-tranomaizina (2008-2014), dia nanoratra ny zavamiseho fanatobiana amin'ny toerana iray ny aterineto, sy ny vaovao antserasera, mivoaka ao amin'ny famoahana Medium i Hossein Derakhshan .
Ka tsy zava-baovao izay lazaiko. Fantatsika fa mihamitovitovy, any niniana namboarina hahafinaritra antsika izay vakintsika, ary – araka ny hevitro – dia lasa mankaleo, amin'ny lafiny marobe.
Saingy ankoatra ny fitenenana, dia izany no mahatonga ahy hieritreritra izay azontsika atao hanoherana ny fironana mankany amin'ny hômôfilia navoakan'ny algôritima. Nanoratra ny ezaka nataoko ho amin'izany aho tamin'ny 2014 – saingy eto misy tetikady nohavaozina nezahina nandramana.
Mihevitra aho fa somary tratra aoriana, saingy tiako ny taratasim-baovao (newsletter). Loharanom-pahalianana ho ahy isan'andro ny olona lian-javatra ankoatra izay mahaliana ahy ary mahay manangona amin'izany fampahafantarana an-tserasera izany. Mahazo fanajana sy fankasitrahana ambony indrindra avy amiko ny olona mitady mihoatra noho ny faritra “malaza indrindra” amin'ny tranonkala, ary mitrandraka amin'ny fitadiavana vatosoa ao anatin'ny vilom-baovaon'ny aterineto. Amin'izao fotoanan'ny fanangonan'ny milina votoaty izao, dia nampianatra ahy zavatra maro ireo sombintsombiny nalain-tanana – izay hoe matetika ireo lohahevitra mety ho tsy novakiako (izany hoe tsy nandrisihana ahy hovakiana). Raha tsy miovaova loatra izany, ahitana tolo-kevitra lehibe momba izany ity votoaty malaza momba ny gazetim-baovao mahaliana ity.
Paikady iray hafa ny manjohy olona ao amin'ny Twitter izay tsy manana zavatra iombonana amiko mihitsy, ary ireo izay maneho hevitra samihafa tanteraka amin'ny ahy. Matetika tsy miditra amin'ny resaka miaraka amin'izy ireo antserasera aho, saingy mahavariana ny mahita ireo karazana loharanom-baovao arahin'izy ireo, ny ifaneraseran'izy ireo, sy ny karazan-javatra heverin'izy ireo ho mahaliana.
Koa satria mihamora kokoa ny manara-driandrano amin'izay atolotry ny algôritima, dia mila fifantohana sy ezaka avy amintsika rehetra ny manoha-riana amin'ireny fironana ireny. Araka ny hevitro, ny dingana voalohany azontsika raisina dia ny minia mitady hoe inona, iza ary aiza no akantsika fampahafantarana. Hanimba ireo olona voahilikilika anatin'ny fiarahamonina indrindra ireny fironana malaza ireny, ary andraikitsika rehetra ny miezaka tokoa hihainoana azy ireny.
Ny dika voalohany tamin'ity lahatsoratra ity dia navoakan'i Zara Rahman / CC BY-SA 4.0 tao amin'ny Zararah.net.
07 Janoary 2021Amerika Avaratra